Thoughts ofaSeagull: နောက်ဆုံး
နှစ်သစ်ဆိုတဲ့ နယ်နိမိတ်ထဲတောင် ခြေကျွံလာခဲ့ပြီ။
မှတ်တိုင်တွေ ပြည့်လို့ နေလေရဲ့။
ပြိုကျလုဆဲ ရင်ဘတ်ထဲက ဆေးရုံလေးမှာ
ဂွမ်းနဲ့ ပတ်တီးတောင် မကျန်တော့ဘူး။
နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ ဆက်တိုက်ပါရစေတော့။ ။ ။
( ပုံကို http://www.diversitystore.com/ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ )
Posted by ဇင်ယော် at 10:37 PM
ဒီတိုက်ပွဲကို မနိုင်ဘဲနဲ့တော့ မတိုက်နဲ့နော်။ သိနေတယ်လေ သိနေတယ်
နိုင်သည် ရှုံးသည် အရေးမကြီးပါဘူး ဇင်ယော်ကြီးရေ့ အရေးကြီးတာကတော့ နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ ဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေဖို့ပါပဲ... ဆက်တိုက်... ဟေ့...
Aja Aja Fighting !!! :)
နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ ဆက်တိုက် Ok!
အောင်မြင်မှုက ကြိုးစားတဲ့လူတွေအတွက် ပြေးမလွတ်ပါဘူး.. အားမလျှော့နဲ့နော် အစ်ကိုေ၇...။
လာပါ သွားရအောင် ဘီယာဆိုင်.. တိုင်ပင်ကြတာပေါ့..
PS ဘယ်တော့ ပြန်လာမှာလဲ ပြောအုံး
အစ်ကိုကြီး တိုက်ပွဲ အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီး၂လား လက်နက်တွေ လူအင်အားလိုရင်လည်းပြောဗျ အသင့်ရှိတယ် ညီဗလး) အင်းးး သိနေသလိုလိုနဲ့ ။ လက်ရှိအခြေနေကိုဖတ်ပြီးးးး ဘာပြောရမလဲမသိ အစ်ကိုကြီးက တော်ပါတယ်လေ အဲ့လောက်ပဲပြောတော့မယ် အားတင်ထား တိုက်ပွဲတွေအများကြီးရှိသေးတယ် ။
မသေမချင်းတိုက်နေရမှာပဲဗျ ဒီတော့ နိုင်လဲ
အောင်ပွဲခံပေါ့ ကျရှုံးချိန်ကျတော့လဲ ခါးစီးခံနိုင်
ဂွတ်တယ်ဗျို့ ကဗျာလေးက မိုက်တယ်
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာလေးပါလား မောင်ငယ်ဇင်ယော်
တိုက်ဟေ့ ... တိုက်ဟ ........ ဘီယာ ... :)
အလဲ့ ကဗျာရေးတော့လည်း ကောင်းတာပဲ။
ဇင်ယော်ကြီးရေ ..တိုက်ဗျာ ၊ တွန်းဗျာ ၊၊ ဒိုင်မမြင်အောင် ခြေချိုး ၊၊ အနိုင်တော့ရပစေ ၊၊
ဘ၀တိုက်ပွဲမှာလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ သိပ်မများပါစေနဲ့
ဒါမှ တို့ကိုဂျီး ကိုငှက်ဝဗျ
ချ ချ၊ မနိုင်မခြင်းချ၊ မြှောက်ပေးပါသည်။ အားမငယ်ပါနှင့်။
Ps: ကြက်ဥလေးမကွဲသ၍ပေါ့နော်။ ဟိ ဟိ။
တိုက်သာ တိုက် .ချသာချ။။။ စစ်ကူလိုလဲပြော..
အကို ဇင်ယော် ကဗျာလေး အရမ်းမိုက်တယ် ။ အားတွေ မာန်တွေ အပြည့်ပဲ ။ ကဗျာကောင်းလေးတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရလို့ဖန်းတီးတဲ့ အကိုကြီးဇင်ယော် ကို ဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင်။ ဒါနဲ့ ကင်းနဲ့ ကွင်း ၁၆ယောက်ကို ဂျပန် အလည်ခရီးစဉ်ပို့ဘို့အတွက် အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာလား ပာင် :P :P
ကဗျာလေး ဂွတ်တယ်ဗျာ ..
ကဗျာလေးလာဖတ်သွားတယ် ကိုဇင်ယော် ကောင်းသောနေ့ပါ ဗျာ :)
နှစ်သစ်မှာ အားယူနေတာလား :D :)
အနိုင်အရှုံးက အဓိက မကျဘူး...
“ တိုက်ပွဲခေါ်သံ” လို့ ။ ဟီဟိ